The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War Freeze A Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း Freeze A လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War
The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Polytopia ၏တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့သည်။ ဒီ 3D အလှည့်-based မဟာဗျူဟာဂိမ်းထဲမှာစစ်သို့သင့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပို့ဆောငျ။ လုပ်ကွက်၏ဤလောကသို့စွန့်စားမှု: မော်ကွန်းအချိုးအစားတစ်ခုအင်ပါယာ Build သင့်ရဲ့သူရဲလေ့ကျင့်များနှင့်အခြားယဉ်ကျေးမှု၏ဗိုလ်ခြေများကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါသူတို့ပေးပို့ ... လယ်ယာ, အရင်းအမြစ်များကိုစုသိမ်း, မိုင်းသတ္တုရိုင်းစူးစမ်း။
အသစ်လှပသောအနိမ့် Poly pixel အနုပညာနှင့်အတူဂန္မဟာဗျူဟာ 4x ဂိမ်းအပေါ်ယူပါ။
စတင်ချိန် မှစ. သော့ပွင့်တဦးတည်းနည်းပညာနှင့်အတူအပေါ်သို့အသီးအသီးကိုသင်၏ယဉ်ကျေးမှုမြှင်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအနွယ်တို့အကြားရွေးချယ်ပါ။
အော်တိုတစ်ခုမော်ကွန်းအလှည့်-based အင်ပါယာဆောက်သင်ထင်နှင့်တိုင်းအလှည့်အပေါ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာလုပ်ကွက်လုပ်ထားတဲ့မြေပုံထုတ်ပေး။ တိုင်းဂိမ်းန့်အသတ်ပြန်ကန်တန်ဖိုးသစ်တစ်ခုအတှေ့အကွုံရှိလိမ့်မည်။
အစာရှောင်ခြင်း RTS ဂိမ်းပွဲများ၏ကြာချိန်နှင့်အတူ 4x မဟာဗျူဟာတိုက်ပွဲ
စစ်ပွဲ၏နောက်ဆုံးစစ်တိုက်တော်တော်လေးမြန်ဆန်စွာဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နက်ရှိုင်းသောမဟာဗျူဟာအလွှာ: ကအခြား 4x သို့မဟုတ် RTS ရှည်လျားဂိမ်းပွဲမတူဘဲ, Polytopia ၏တိုက်ပွဲအနုပညာတစ်ခု on-the-go ချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။ လူပျိုကစားသမား mode မှာ, ဂိမ်း၏ရည်မှန်းချက်ကို 30 အလှည့် (စုံလင်) တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှရမှတ်ရရှိရန်, သို့မဟုတ်အားလုံးကိုဆန့်ကျင်တပ်ဖွဲ့များ (Dominant) ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်။ multiplayer အတွက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်ပါတယ် 10,000 ရမှတ်ရမှတ် (ဘုနျးတျောကို) ရောက်ရှိဖို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုပြိုင်ဘက်မြို့တော် (စခွေငျးငှါ) စစ်ပွဲနှင့်သိမျးပိုကျဆင်နွှဲဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့လမ်းသို့မဟုတ်ကျောင်းပေါ်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဆီး! နေ့လယ်စာရှေ့တော်၌ထိုစစ်ပွဲအပြီးသတ်! သိမျးပိုကျခွငျးအားဖွငျ့အနိုင်ရသို့မဟုတ်ယာဉ်အားဖြင့်အနိုင်ရ, သုတေသနနှင့်ထပ်မံမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးရောနှောထက်သင့်ရဲ့အဖွဲ့ခွဲဖွံ့ဖြိုး။
အစွမ်းထက်နိုငျငံတျောသညျမှသေးငယ်တဲ့ရွာကနေသင့်ရဲ့မျိုးနွယ်စုကိုယူပါ။ သင့်ရဲ့မြို့လူဦးရေ၏အားသာချက်များကိုအသစ်အဆောက်အဦများတည်ဆောက်ရန်, စစ်သူရဲအပေါ်ဖြုန်းဖို့ဒါမှမဟုတ်လွှမ်းမိုးမှုကိုအောင်မြင်ရန်နည်းပညာသစ်များသုတေသနမှဝင်ငွေ generate နိုင်ရန်အတွက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး, ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးအားဖြင့်မပေါက်ပါဘူး။
သူတို့ကြီးထွားအဖြစ်သင်တို့မြို့များအထိအခုလဲသင် options အမျိုးမျိုးကိုပေးမည်: ဥယျာဉ်တည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်အစွမ်းထက်သူရဲလေ့ကျင့်ပေးရန်, နံရံများစိုက်ထူရန်, ပိုပြီးဝင်ငွေ generate ရန်, နေတတ်တယ်လူဦးရေကိုတိုးမြှင့်ဖို့, သင့်ဘုံနယ်နိမိတ်ချဲ့ထွင်ရန်။ ဘုံ Explore, အမြိုးအနှယျတသောင်းဒီအလှည့်-based RTS နိုငျငံတျော၌သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်း။
, အမြူ၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောသေးငယ်တဲ့ရွာတွေရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သူရဲသုံးပါကသူတို့ကိုအောင်နိုင်နှင့်သူတို့သည်သင်၏နိုင်ငံတော်အဘို့အသစ်တစ်ခုကိုမြို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်ပိုမြို့ကြီးများနည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသန၏ကုန်ကျစရိတ်ဖွစျလိမျ့မညျမြင့်မားသင့်ရဲ့အင်ပါယာမှကဆက်ပြောသည်။
သင့်ရဲ့အဖွဲ့ခွဲနှင့်အတူအခြား clans' မဟာမိတ်အဆင့်အတန်း Watch, သူတို့ကိုမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့သူရဲတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြင့်အားလုံး Conquest ကြိုးစားပါ။ အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့ယူနစ်ချထားပါ, သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးမြှင့်ရန်သင့်စစ်ပြန်ယူနစ်မြှင့်တင်ရန်, တစ်ဦးချိုင့်၌ထက်တစ်တောင်ပေါ်မှာစစ်တိုက်ခြင်းငှါအတူတူပင်မဟုတ်ပါရှိနေတတ်တယ်။ မြို့ကြီးများအတွင်း၌ထားရှိတပ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးတိုးလာရပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်မြင့်သောမြို့များကိုသင့်ရဲ့စစ်တပ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ဖို့သူရဲကောင်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်။
သူတို့ကိုမော်ကွန်းရေတပ်တိုက်ပွဲများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်နှင့်ပင်လယ်ကနေမြို့ကြီးများနှင့်ပြိုင်ဘက်ဗုံးကြဲနိုင်သည်ကို upgrade လုပ်လို့ရပါပြီလှေသောင်မတင်အားဖြင့်ပင်လယ်မှပြည်မှဖွဲ့စည်းသင့်ရဲ့ယူနစ်ကိုယူပါ။
သငျသညျ RTS ဂိမ်းနဲ့တူပါလျှင်ဤနည်းဗျူဟာ sandbox 'စစ်ပွဲဂိမ်းကိုသင်မြေပုံကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ pixel များအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရုန်းကန်နေရပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဘို့စစ်တိုက်နှင့်သင့်အနွယ်အထိမ်းအမှတ်အောင်ပွဲဖြစ်စေ!
Polytopia ၏တိုက်ပွဲသင်သည်အခြားလူများနှင့်အတူအွန်လိုင်းမှစစ်တိုက်ကစားရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ကို server ကိုကုန်ကျစရိတ်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်အနည်းဆုံးအနွယ်ကိုဝယ်ယူခဲ့ကြရပါမည်ဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါ AI အဆန့်ကျင် singleplayer အတွက်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သိမ်းပိုက်ရေးဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
on-the-go စစ်ပွဲဂိမ်းကဒီ Epic မဟာဗျူဟာ 3d အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိ၎င်း၏လှပသောလုပ်ကွက် pixel အနုပညာအရောင်းဝယ်ဖို့သို့မဟုတ် https://www.midjiwan.com/ ကိုသိရန်ရ
The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 4.72k 7.62M
The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း Freeze A
ထုတ်လုပ်သူ Midjiwan AB
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.midjiwan.com/privacy.pdf
ဗားရွင္း: Freeze A
Release date: 2019-06-14 19:31:42
လက်မှတ် SHA1: FB:1D:EF:01:F5:5C:06:F9:83:B1:1F:29:46:C7:79:FD:67:53:C9:73
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Felix af Ekenstam
အဖွဲ့အစည်း (O): Midjiwan
The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ